Red Ribbon From ကေကေ Red Ribbon From နီစံ (အနီ)
Added by ♣တောသူမလေး♣3Comments 1 Like
Started this discussion. Last reply by လင်းကိုကို Mar 15, 2013. 19 Replies4Likes
ဗုဒ္ဓဘာသာ ကလေးလူကြီးတော်တော်များများကို မေးကြည့်တဲ့အခါမှာ အလုံးလိုလိုဟာ အတူတူပဲလို့ ဖြေကြတယ်။ ဒီလို ဖြေကြတဲ့ အတွက်လဲ သူတို့မှာ အထောက်အထားက ရှိနေတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်း ရနေကြတဲ့ သြကာသ ကန်တော့ကြိုးထဲမှာ (ရှိခိုးပူဇော် ဖူးမြော်မန်လျှော့ ကန်တော့ပါ၏) လို့ ပါနေတော့ ကန်တော့တာနဲ့ ရှိခိုးတာ အတူတူပဲလို့ ထင်နေကြတာပဲ။ အမှန်တစ်ကယ်မှာရော ရှိခိုးတာနဲ့ ကန်တော့တာဟာ အတူတူပဲလား ? တစ်မျိုးစီလား ?ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
A blog post by ♣တောသူမလေး♣ was featured
အကြောင်းကောင်းနဲ့ ဝေးနေရင် အကျိုးကောင်းနဲ့ ဝေးနေမယ်
သာမာန်အားဖြင့် ကြည့်ရင် “အလိုနည်း၊ ရောင့်ရဲ၊ တစ်ယောက်တည်းပျော်၊ ၀ီရိယရှိ”လို့ အရည်အသွေး လေးမျိုးတည်း ထင်ရပေမယ့် ဒီလေးမျိုးထဲမှာ ကောင်းမြတ်တဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားတွေ၊ ကောင်းမြတ်တဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေ အကုန်လုံး ပါဝင်ပါတယ်။ဒီအရည်အသွေးလေးမျိုးသာ ပီပီပြင်ပြင် ပြည့်စုံရင် တခြား ကောင်းမြတ်တဲ့ အရည်အသွေးတွေ အားလုံးလည်း ပြတ်ပြတ်သား ပြည့်စုံလာတာပါပဲ။ ဒီခေါင်းစဉ်ကြီး လေးခုကိုသာ အဓိကဦးတည်ပြီး ကျင့်သုံးလိုက်ရင် မရေမတွက်နိုင်အောင် များပြားလှတဲ့ ခေါင်းစဉ်ငယ်ပေါင်းများစွာကိုလည်း ကျင့်သုံးပြီးသား ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဥပမာ - “တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်း”ဆိုပါတော့။ အလိုနည်းခြင်း မရှိလို့၊ ရောင့်ရဲခြင်း မရှိလို့သာ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တာပေါ့။ အလိုကြီးလို့၊ မရောင့်ရဲနိုင်လို့သာ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တာပေါ့။ အလိုနည်းမယ်၊ ရောင့်ရဲမယ်ဆိုရင် တစ်ကိုယ်ကောင်း မဆန်တော့ပါဘူး။ ဒါဆိုရင် “တစ်ကိုယ်ကောင်း မဆန်ပါနဲ့”လို့ ပြောလိုက်တာဟာ “အလိုနည်းပါ၊ ရောင့်ရဲပါ”လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ အလိုနည်းတဲ့စိတ်၊ ရောင့်ရဲတဲ့စိတ်သာ အားကောင်းရင် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့စိတ် လုံးဝ မရှိတော့ပါဘူး။ တရားအားထုတ်နေပေမယ့် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့စိတ် ရှိနေရင်…See More
jawti သည် ♣တောသူမလေး♣'s၏ 'နိယာမတရား (၅) ပါး'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
jawti သည်♣တောသူမလေး♣'s ၏ 'နိယာမတရား (၅) ပါး' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
sayarchit သည်♣တောသူမလေး♣'s ၏ 'မြန်မာနိုင်ငံရောက် ဗုဒ္ဓ၏စွယ်တော်များ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
မိုးမမအောင် သည်♣တောသူမလေး♣'s ၏ 'ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ လက်သစ်တောင်တာ ဆုံးမစာများ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
မိုးမမအောင် သည်♣တောသူမလေး♣'s ၏ 'ဗုဒ္ဓ၀င်ပုံတော်များ (၃)' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
စိုင်း​မော်​ခမ်း liked ♣တောသူမလေး♣'s profile
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်♣တောသူမလေး♣'s ၏ 'အစပ် (၃) ပါး' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်♣တောသူမလေး♣'s ၏ 'သုဝဏ္ဏဘူမိနိုင်ငံ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်♣တောသူမလေး♣'s ၏ 'လောနိုင်ငံ၌ ဗုဒ္ဓသာသနာ စတင်ပြန့်ပွားပုံ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည် ♣တောသူမလေး♣'s၏ 'ဘုရားပွင့်တော်မူစ သာသနာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်လာပုံ'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်♣တောသူမလေး♣'s ၏ '(၁) ဟိရီသြတ္တပ္ပတရားနှင့် သမ္မုတိသစ္စာ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်♣တောသူမလေး♣'s ၏ 'ဓမ္မစကြာသုတ်တော် အနှစ်ချုပ်' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်♣တောသူမလေး♣'s ၏ 'အနတ္တလက္ခဏသုတ်' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်♣တောသူမလေး♣'s ၏ 'ရတနသုတ်တော်ဖြစ်စဉ် ပါဠိတော် အကျိုးသွား' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်♣တောသူမလေး♣'s ၏ 'မင်္ဂလသုတ်တော်ဖြစ်စဉ် ပါဠိတော် အကျိုးသွား' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်♣တောသူမလေး♣'s ၏ 'ဗောဇ္ဈင်္ဂသုတ်တော်ဖြစ်စဉ် ပါဠိတော် အကျိုးသွား' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်♣တောသူမလေး♣'s ၏ 'အာဋာနာဋိသုတ်တော်ဖြစ်စဉ် ပါဠိတော် အကျိုးသွား' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်♣တောသူမလေး♣'s ၏ 'ဗောဇ္ဈင်သုတ်တော်(၅)မျိုး' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်♣တောသူမလေး♣'s ၏ 'ပရိတ်ကြီး (၁၁)သုတ်နှင့် အဓိဋ္ဌာန်ပြုပုံများ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
♣တောသူမလေး♣ မှ ကြိုဆိုပါ၏ တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ရှင်!
ဒီဘလော့ကို စက်တင်ဘာ 10, 2014 တွင်2:30pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment2Likes
ဒီဘလော့ကို စက်တင်ဘာ 10, 2014 တွင်2:30pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments 1 Like
ဒီဘလော့ကို စက်တင်ဘာ 10, 2014 တွင်2:29pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments 1 Like
ဒီဘလော့ကို စက်တင်ဘာ 9, 2014 တွင်12:24pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments0Likes
ရှိတာလည်း မဖော်နဲ့ မရှိတာလည်း မခေါ်နဲ့
ဒီဘလော့ကို စက်တင်ဘာ 9, 2014 တွင်12:18pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments0Likes
အလိုနည်း၊ အလိုကြီး၊ အလိုကဲ၊ အလိုဆိုး
ဒီဘလော့ကို စက်တင်ဘာ 9, 2014 တွင်12:17pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments 1 Like
ဒီဘလော့ကို မေ 26, 2014 တွင်1:53pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments6Likes
လက်က ယူပေမယ့် စိတ်က မယူရင် အလိုနည်းတာပါပဲ
ဒီဘလော့ကို မေ 26, 2014 တွင်1:49pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment4Likes
ဒီဘလော့ကို မေ 26, 2014 တွင်1:48pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment2Likes
ဒီဘလော့ကို စက်တင်ဘာ 20, 2013 တွင်2:42pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments0Likes
ဒီဘလော့ကို စက်တင်ဘာ 20, 2013 တွင်2:40pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment0Likes
ဒီဘလော့ကို စက်တင်ဘာ 20, 2013 တွင်2:38pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments0Likes
သူများကြည့်ဖို့ အလှပြင်တာ သံဝေဂဖြစ်စရာ
ဒီဘလော့ကို စက်တင်ဘာ 19, 2013 တွင်10:51am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။4Comments5Likes
စိတ်ညစ်စရာကြုံလို့ စိတ်ညစ်တာ သံဝေဂမဟုတ်
ဒီဘလော့ကို စက်တင်ဘာ 19, 2013 တွင်10:50am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments2Likes
ဒီဘလော့ကို စက်တင်ဘာ 19, 2013 တွင်10:30am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment2Likes
ဒီဘလော့ကို ဇူလှိုင် 18, 2013 တွင်12:00pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment 1 Like
ဒီဘလော့ကို ဇူလှိုင် 18, 2013 တွင်11:54am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments3Likes
ဒီဘလော့ကို ဇူလှိုင် 18, 2013 တွင်11:30am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment 1 Like
ဒုဿီလပေမယ့် သံဃာကို ရည်မှန်းပြီး လှူရင် ရဟန္တာကို လှူတာထက်ပိုအကျိုးကြီးတယ်
ဒီဘလော့ကို ဇူလှိုင် 16, 2013 တွင်2:30pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment 1 Like
ဒီဘလော့ကို ဇူလှိုင် 16, 2013 တွင်1:43pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment3Likes
12:51pm အချိန်မေ 22, 2015, တွင် ဘိုဘိုဇင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ညီမ မင်္ဂလာပါ အကို့ နာမည် ဘိုဘိုဇင် ပါ မှတ်မိသေးလားတော့မသိဘူး အကို နိုင်ငံခြားရောက်နေတာ ကြာပြီဆိုတော့ ဒီဆိုဒ်နဲ့လည်းအဆက်သွယ် ပျက်သွားခဲ့ပါတယ်
4:30pm အချိန်မတ် 3, 2015, တွင် Nilar Htet Htet Aung မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မွေးနေ့ ဆုတောင်းအတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ညီမလေး။ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ရပါစေ။ ညီမလေးလည်း ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒမှန်ကမျှ ပြည့်စုံပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။ တရားတွေ share ပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ သာဓု၊သာဓု၊သာဓုခေါ်ပါတယ်ရှင်။
8:14pm အချိန်ဒီဇင်ဘာ 27, 2013, တွင် soemyint မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
စာပေတွေနဲ့ကုသိုလ်ပြုနေလို့ သာဓု သုံးကြိမ်ခေါ်ပါတယ်
12:34am အချိန်ဒီဇင်ဘာ 25, 2013, တွင် အရှင်နန္ဒိယ(ပုဂံ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ဒကာမလေးရဲ့မှတ်ချက်ကို ဖတ်ရပါသည်။ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးလည်း အထူးတင်ပါတယ်။ကျန်းမာပါစေ။
2:52pm အချိန်ဒီဇင်ဘာ 12, 2013, တွင် ven.sobana မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ဦးဇင်း ကျောင်းသင်္ခန်းလေး ထဲကို အလည်လာရောက် မှတ်ချက်ရေးပေးသွားတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါပဲ
တောသူမလေး ကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ။ သုံးနှစ်ရှိပြီကျမ်းမစွဲတဲ့ အတွက်
ဆရာသမားမိဘတွေရဲ့ ဖိအားကြောင့် အင်တာနက်မထိုင်ဖြစ်တာကြာလို့ ဒကာမလေးရဲ့ မှတ်ချက်ကို အခုမှပဲပြန်ပြီးမှတ်ချက်ရေးဖြစ်တာနားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်
2:43pm အချိန်ဒီဇင်ဘာ 12, 2013, တွင် လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
2:42pm အချိန်ဒီဇင်ဘာ 12, 2013, တွင် လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
3:18pm အချိန်အောက်တိုဘာ 2, 2013, တွင် Ye Yint Aung မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
7:25pm အချိန်စက်တင်ဘာ 25, 2013, တွင် သရဖီ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
4:00pm အချိန်စက်တင်ဘာ 8, 2013, တွင် oo oo kyaw မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
thanks you ♣တောသူမလေး♣ :)
8:05pm အချိန်စက်တင်ဘာ 1, 2013, တွင် ခင်သက်ဆွေ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
11:43pm အချိန်ဇူလှိုင် 28, 2013, တွင် သုဒသန မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
တောသူမလေး ကိုိရင်သုဒဿန လာလည်သွားတယ်နော် ဒီခေတ်ထဲမှာဘာသာရေးလိုက်စားတဲ့ မိန်းခလေးဆိုတာ 100မှာတစ်ယောက်လောက်ပဲရှိနိုင်တာ ခုလိုတောသူမလေး ဘာသာရေးလိုက်စားတာတွေ့ရတော့ သြော်....ဒိုသာသနာမှာခုလိုမိန်းခလေးမျိုးရှိတွေ့ရှိသေးသားပဲဆိုပြိး တောသူမလေးကို အရန်းကျေးဇူးတင်မိတယ်သိလား ဘာသာရေးကိုဒီထက်မက အားထုက်နိုင်ပါစေလို့ ဒီအရာမျိုးက လူတိုင်းလုပ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူး တောသူမလေးက ဘယ်ကလဲဟင် တစ်မျိုးမထင်နဲ့နော် သိထားတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့လို့ မဟုတ်ဘူးလား ပြန်တော့မယ်နော်ဘိုင့် ပုံပို့တာကုတ်တွေပေါ်လာလို့ အဂ်လိပ်စာမဟုတ်ဘူးနော် ပုံဘယ်လိုပို့ရတာလဲ
5:11pm အချိန်ဇူလှိုင် 15, 2013, တွင် မောင်သိန်းလင်း မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
5:08pm အချိန်ဇူလှိုင် 15, 2013, တွင် မောင်သိန်းလင်း မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
2:26pm အချိန်ဇူလှိုင် 9, 2013, တွင် ရှင်စန္ဒာသိရီ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
အမ ကိုရင်လာလည်ပါတယ်နော်ပျော်ပါစေ ။ပြုံးပြသူထက်ဆုံးမသူကိုပိုချစ်ပါ။ ပျင်းရိခြင်းရဲနောက်ကွယ်မှာဆုံးရှံးမှူများစွာရှိတယ်။ လောကီအစုတ် လူတို.နုတ်က မဟုတ်လည်းပြော ဟုတ်လည်းပြော၏်။
3:49pm အချိန်မေ 24, 2013, တွင် နန်းလေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
7:29pm အချိန်မေ 16, 2013, တွင် saw htwe မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ညီမလေးရေ mp3 တရားဖိုင်လေးတစ်ဖိုင်လောက်တင်ချင်လို့ ဘယ်လိုတင်ရလဲဆိုတာ ပြောပေးစေလိုပါတယ်။
10:44am အချိန်မေ 14, 2013, တွင် သူရိယ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့ကျတော်မွှေးနေံအမှတ်တရရှိနေပေးလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ဘ၀မှာအဆင်မပြေမှုတွေ့ကင်းဝေး ကိုမြတ်နိုးတဲ့ဘ၀ ပန်းတိုင်လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်
11:23pm အချိန်မေ 2, 2013, တွင် ကလေးတို.ဆရာမ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
6:14pm အချိန်ှဧပြီ 29, 2013, တွင် တာတာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
တောသူမလေးရေလာလည်တာအရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် တာတာလဲပြန်လာလည်သွားတယ်နော် ပျော်ရွှင်ပါစေ